Fortnite dia hiverina amin'ny iOS amin'ny alàlan'ny GeForce Now | iPhone News
Fortnite dia hiverina amin'ny iOS amin'ny alàlan'ny GeForce Now
Tamin'ny Mey 2021, nanakoako ny vaovao iray izay nanamarika izany Fortnite dia hiverina amin'ny iOS tsy mila mandeha amin'ny App Store amin'ny GeForce Now, ny sehatra Nvidia izay miasa mitovy amin'ny Stadia sy ny xCloud an'ny Microsoft, izay tompon'andraikitra amin'ny fampandehanana ny lalao ny mpizara.
Na izany aza, GeForce tsy mamela anao hividy lalao, fa sehatra tsotra ho afaka milalao izay anaram-boninahitra novidinay amin'ny sehatra lalao video hafa na ny Epic Games Store, Steam… Rehefa avy niandry ela, GeForce dia hanomboka hanolotra Fortnite amin'ity herinandro ity amin'ny alàlan'ny sehatra misy azy amin'ny alàlan'ny beta mihidy.
Amin'izany fomba izany, ny mpampiasa rehetra te-hilalao Fortnite indray amin'ny iPhone na iPad, toy ny Tsy maintsy mampiasa navigateur fotsiny izy ireo mba hidirana amin'ny GeForce Now.
Tokony hotsarovana fa, toa an'i Stadia sy xCloud, GeForce Now tsy afaka manolotra fampiharana hidirana amin'ny sehatrao noho ny famerana ny App Store.
Araka ny voalaza avy The saika, tolotra fortnite fanohanana feno ho an'ny fanaraha-maso mikasika. Azo inoana fa hanolotra fanohanana ho an'ny mpanara-maso ihany koa izy, tahaka ny atolotr'i Google sy Microsoft amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny sehatra lalao video.
Mba hidirana amin'ity beta ity dia ilaina izany ho mpampiasa mandoa vola amin'ity sehatra ity. Ny tsy fantatra amin'izao fotoana izao dia ny hilalao Fortnite amin'ny alàlan'ny GeForce Now, ilaina ny mandoa ny famandrihana na ny Epic Games dia nanao fifanarahana manokana tamin'i Nvidia mba hampihenana ny tahan'ny na tsy voatery aloa mivantana.
Amin'izao fotoana izao tsy fantatra izay mety ho daty famoahana ny Fortnit amin'ny GeForce Now. Tsy maintsy miandry an'ity fitsapana beta ity isika mba hahitana ny fomba tsara indrindra amin'ny fampisehoana.
Raha mandeha araka ny nantenaina ny zava-drehetra, Azo inoana fa amin'ny Febroary amin'ity taona ity, ireo mpampiasa Fortnite rehetra dia afaka mankafy ity lohateny ity indray amin'ny iPhone, iPad na Mac.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Fortnite dia hiverina amin'ny iOS amin'ny alàlan'ny GeForce Now
Ny hetsika Battle Cats Taom-baovao dia manolotra Spins maimaim-poana, iraka manokana ary maro hafa
Azonao sary an-tsaina ve ny HomePod manana bateria ivelany? Nilaza i Mark Gurman fa niasa tamin'izany i Apple